Hapana yakaiswa girl mods kanowanikwa FSX uye P3D
mubvunzo Hapana yakaiswa girl mods kanowanikwa FSX uye P3D
1 gore 10 ago - 1 gore 10 ago #450 by StargateMax
Zviri Zvinoshamisa kuti hapana anombonzwisisa ataura nezvazvo asi.
Ini ndakagadza wandei girl wedzera-wanda I kutorwa kubva panzvimbo ino, inonzi mumwe kana vose FSX uye Prepar3D. Hapana sceneries inoratidza ari (s) mutambo zvose. Nendege wedzera-wanda vanoshanda wakaisvonaka, asi handisi vafarire avo.
Neniwo kutorwa ichi Hawaii girl, anenge 7 GB, uye Kauai zvakare. All ndinoona mutambo wacho default crappy nzvimbo kungofanana pamberi.
Chii chingava dambudziko?
Last edit: 1 gore 10 mwedzi yapfuura StargateMax.
1 gore 10 ago #451 by Dariussssss
Chokutanga, ndinofunga kuti zvakanaka kuti kutaura kwaziwai.
Chechipiri, regai kuita ndikurume.
Chechitatu, zvakawanda info.
1 gore 10 ago #452 by StargateMax
1) Hello (urombo)
2) Pano ndinoti: Verenga 4 pazasi.
4) Ok, ndine akaendepiko, hapana zvinokunetsa neni, sokunge tose funga mumwe unhu.
1 gore 10 ago #453 by Gh0stRider203
Ndinofunga ndinoziva Hawai'i mumwe iwe kutaura. Nepo angaisa Ungafanira kuwedzera kuti mutambo, manually. Kwete paigona NEI ichi, asi dzimwe nguva ndizvo zvazviri.
Kana uri chokwadi sei kuita kuti lemme vanoziva uye ndinogona kubatsira Ya pamwe kuti
1 gore 10 ago - 1 gore 10 ago #454 by Dariussssss
Ngatitorei kuzviita sezvizvi ...
Chokutanga, unofanira kundiudza zvimwe zvinhu ...
Wanga dzishandise zvakarurama?
Ko iwe Activate zvinhu zviri FSX wako?
Izvo girl packs it muri kuedza kuisa?
Ndakanga yakawanda girl kutorwa kubva pano, uye zvose zviri kushanda, kana muchiita zvakanaka.
Last edit: 1 gore 10 mwedzi yapfuura Dariussssss.
1 gore 10 ago #457 by StargateMax
Ngatitange yakachena, anonzwa nani kuti nzira. Sorry pamusoro apa.
Ini waisa kuti guru Hawaii photoreal Vol 1-2-3 rongedza, Kauai, Mt. Everest, Fiji, Balearic zvitsuwa v2.
The installers vakati kuti vachanzwikwa kwaitika iiswe uye ndakafunga kuti acharatidza ari Scenery Library.
Ndakaona chinhu chitsva Scenery Library (zvose mitambo).
Zvino ndakacherekedza mukati neAdhoni Scenery forodha (zvose mitambo), uye pakange pasina ndakanga iiswe. Ndakafungawo kuti vakarasa yakaiswa vachiravana, asi handina kukwanisa kuwana navo kuti kuwedzera navo manually.
Nepo achinyora mhinduro iyi pano ndakangotanga ndina chiedza girobhu racho kamwe. Ndakatarisa mukati Scenery (kwete "neAdhoni") forodha uye scrolled kure pasi, akavawana imomo! Uye kuwedzera navo Scenery Library kubva ipapo anoita basa.
Ndinofunga vakazoguma kugadziriswa. Ndinokutendai nokuti pakubvumawo mafungiro angu, ndakanga chaizvoizvo ndagumburwa pashure pemazuva 2 pakati messing nayo.
Ndinovimba this post anobatsira mumwe munhu aigona kusangana chete dambudziko zvandakaita.
1 gore 10 ago #464 by Dariussssss
Ndaiva zvimwechete happening.Don't kuziva nei, asi installers vari kuita zvimwe zvinhu zvakaipa zvakaipa. Mumwe update zvakakodzera zvinonyanya kukosha.
Nice kuona kuti zviri kushanda. Saka zvino imi akasimuka kuti nguva inotevera kana chinhu haasi kushanda., Tiudze zvikuru kwazvo sezvinobvira, kuti achatibatsira zvose yokugadzirisa dambudziko.
Time chokusika peji: 0.238 mumasekonzi